Ukuthengiswa kweMacBook kukhule nge-94% kwikota yokuqala yalo nyaka | Ndisuka mac
Kwikota yokuqala yalo nyaka iApple ithengise phantse Izigidi ezi-6 zeMacBooks. Amanani aqikelelwa, kuba inkampani ayihlali inika ulwazi malunga nokuthengisa kwayo, nangona ingamanani abonisa.
Ngokuqinisekileyo ixesha elitsha leMacs I-Apple Silicon Ibe yimpumelelo kwinkampani. Ukubheja okuyingozi ngu-Apple, ngexesha lobhubhane wehlabathi, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo ilungile. Kwaye ngoku, iMac yokuqala ikwavela kunye neprosesa ye-M1. Amaxesha amnandi eApple, ngaphandle kwamathandabuzo.
I-Apple ithengise uqikelelo 5,7 izigidi yeeMacBooks kwikota yokuqala ka-2021, ngokusekwe kwintelekelelo entsha epapashwe kwintengiso yeelaptop namhlanje ngoBuchule boHlahlelo.
Amanani aquka ukuthengiswa kweemodeli these Pro y MacBook Air, ngaphandle kweMac mini, iMac Pro, kunye neMac. Oko kukuthi, kuphela iilaptops zenkampani.
I-Apple ibingumenzi wesine ngobukhulu weelaptop kwihlabathi liphela, ilandela iDell, i-HP kunye neLenovo, kunye neenkampani ezintathu zokuhambisa phakathi kwe-10 ne-16 yezigidi zeelaptops kwikota yokuqala ka-2021.
Iilaptops eziyi-5,7 ezithengiswe yi-Apple zonyuse iipesenti ezingama-94 xa kuthelekiswa ne-2,9 yezigidi ebezithumele ikota yonyaka ophelileyo. Konke oku kubulela ekukhuleni okuqinileyo okuvela kwimfuno eqhubekayo yabasebenzisi abasebenza okanye abafundela ekhaya ngenxa yobhubhane, kunye nokwamkelwa okuhle kwabasebenzisi beMacs entsha eneprosesa. M1.
Isabelo sentengiso sika-Apple sekota ibiyi-8.4 yeepesenti, xa kuthelekiswa neepesenti ze-7.8 kunyaka ophelileyo. lenovo y HP bayaqhubeka ukuba ziinkokheli zentengiso, bethengisa iindidi zeelaptops eziqhuba iiWindows ecaleni kweChannelbook, ngokukhula okunamandla kwicandelo lezemfundo, ikakhulu ngenxa yexabiso labo.
Intengiso elungileyo enkosi kwi-M1
Iyonke intengiso yeelaptop inyuse ipesenti ye-81 ngonyaka-nangaphezulu konyaka phakathi kwabo bonke abathengisi abakhulu. iapile Ngokukodwa, inokuba ibone ukukhula okukhulu, enkosi kumiliselo lwangoNovemba lwe-1-intshi iMacBook Pro M13 kunye neMacBook Air.
I-Apple iya kugcina ukukhula kwayo kwintengiso ye-PC njengoko ilungiselela ukwazisa iimodeli ezintsha, ezinamandla ngakumbi ze-Apple Silicon kamva kulo nyaka. Amarhe acebisa ukuba kukho iimodeli ezihlaziyiweyo ze 16 intshi iMacBook Pro ilungele ukwaziswa, kunye a iMac M1 inkulu kune-intshi ye-24 yangoku. U-Apple kulindeleke ukuba azise iMacBook Air entsha kunye neMacBook Pro entsha, kodwa abanokufika de kube ngu-2022.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ukuthengiswa kweMacBook kukhule ngama-94% kwikota yokuqala yalo nyaka
UMongameli we-IBM uthi ii-Chips ezinqongopheleyo zinokuhlala iminyaka emibini ngakumbi